Maxamed Aadan Shamuuri oo ku geeriyooday Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Maxamed Aadan Shamuuri oo ku geeriyooday Muqdisho
Sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan ehelkiisa iyo hobollada Waabari, waxaa xalay Muqdisho ku geeriyooday mid ka mid ah fannaaniintii caanka ahayd ee Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada Muqdisho, ku geeriyooday, Fanaanka Maxamed Aadan Shamuuri, oo ka tirsanaa hoballada Waaberi, kaas oo muddooyinkii danbe ku xanuunsanayay degmada Warta-nabadda ee gobolka Banaadir.
AUN, Shamuuri, ayaa muddo dheer aad uga dhex muuqday fanka Soomaalida, wuxuuna, wuxuuna ahaa heesaa, laxamiiste iyo musiishin intaba, waxuuna ka soo qeyb qaatay riwaayado badan oo wacyi galin ahaa.
Sida uu sheegay, Fannaanka Maxamed Xasan Barrow, AUN, Shamuuri, wuxuu fanka ku biiray 1970-meeyadii, wuxuuna lahaa heeso caan ah, oo ay ka mid tahay, “Qalbi Nabar Ku Yaallaan Qaboobin”.
Maxamed Aadan Shamuuri, ayaa saaka lagu aasi doona Muqdisho, waxaana la fiyaa in ay aaskiisa ka qeyb qaataan duqowda hobollada Waabari oo muddo dheer shaqo wadaag ahaayee.
Fannaaniintii hore, ayaa intooda badan ku dayacan gudaha dalka, waxayna ka cabanayaan daryeel la’aan baahsan, mana jiro ka warqab gooni ah oo Wasaaradda Warfaafintu xil iskamaa saarto Wakaaladda Fillimada Soomaaliyeed, (SOFA).